बाँकेमा नदीजन्य पदार्थ व्यापक चोरी निकासी, बेथितिको चाडै अन्त्य गरिने प्रजिअ कुरुम्वाङ्गको प्रतिबद्धता - Lumbini Patra Dainik
सुचना / बिज्ञापन
बाँकेमा नदीजन्य पदार्थ व्यापक चोरी निकासी, बेथितिको चाडै अन्त्य गरिने प्रजिअ कुरुम्वाङ्गको प्रतिबद्धता
लुम्बिनी पत्र । बाँके जिल्लामा नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी व्यापक भइरहेको जनगुनासोपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङ्गआफैंले स्थलगत अध्ययन गरेका छन् । उनकै सक्रियतामा आइतबार टिपर र ट्याक्टर गरी एक दर्जन गाडीलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । नौ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ ।
‘राजस्व नतिर्ने, ढुंगा चोरी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं । सम्बन्धित गाउँपालिकालाई सरकारी राजस्व तिर्नेलाई मात्रै काम गर्न दिन्छौं,’ उनले भने । लकडाउनका कारण लामो समयदेखि विकासका काम रोकिएका कारण पालिकाहरूलाई केही दिनका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न दिन आग्रह गरिएको छ । तोकिएको परिमाणभन्दा बढी झिक्न नदिन पालिकाहरूले अनुगमन गर्ने छन् । ‘कोभिड–१९ का कारण विकास निर्माणका काम रोकिएकाले पालिकाहरूलाई नदीजन्य पदार्थ नझिक्न आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार बाँकेमा १६ वटा क्रसर उद्योग र ५ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता छन् । तीनवटा मात्रै क्रसर उद्योग नवीकरण गरिएका छन् । डुडुवाको जय नेपाल, बाबा स्टोन नरैनापुर र शिवशंकर कोहलपुर नवीकरण भएका छन् । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने झिझरी खोलामा रहेको दीपक क्रसर उद्योग नवीकरणको प्रक्रियामा रहेको बताए ।
उक्त क्रसर उद्योग लामो समयदेखि निकुञ्ज क्षेत्रमा सञ्चालन गरिए पनि कुनै रोकटोक छैन। निकुञ्जभित्र सर्वसाधारणको प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाँकेका अधिकृत उजिरप्रसाद न्यौपानेका अनुसार यहाँ सञ्चालनमा रहेका धेरैजसो क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग मापदण्डविपरीत छन् । उनले जंगल र राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रभन्दा एक किलोमिटर टाढाको दूरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने बताए । नदी र खोलाबाट ५ सय मिटरको दूरीमा मात्रै क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग खोल्न पाइन्छ । ‘सबै मापदण्डविपरित सञ्चालनमा छन् । हामीले भनेको कसैले टेर्दैनन्,’ उनले भने । मापदण्डअनुसार बालुवा प्रशोधन उद्योगले गिट्टी र ढुंगाको काम गर्न पाउँदैनन् । तर, राप्ती सोनारीका प्रशोधन उद्योगले भने ढुंगा र गिट्टीको काम गरिरहेका छन् ।
ठेक्का नपरेपछि राप्ती नदी, मुगुवा, खैरी र झिझरीलगायतका खोलाबाट रातारात नदीजन्य पदार्थ चोरी गरी निर्बाध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भएका हुन् । स्थानीयका अनुसार एक दर्जनभन्दा बढी क्रसर र बालुवा प्रसोधन उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
पालिकाले दुईपटक नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का खोलेको थियो । एक जनाले पनि टेन्डर हालेनन् । ‘हामीले दुईपल्ट ठेक्का खोल्दा कोही पनि आएनन् । तर, क्रसर र बालुवा उद्योग मजाले चलेका छन्,’ राप्ती सोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारुले भने, ‘हाम्रा नदी र खोलाबाट चोरी नगरेको हो भने कसरी क्रसर उद्योग चलेका छन् ? क्रसर क्षेत्रमा कहाँबाट ढुंगाको पहाड बन्यो ?’
यसअघि पालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि १६ करोडमा ठेक्का दिएको थियो । ठेक्का नलागेपछि पालिकाले केही दिनका लागि राजस्व लिएर ढुंगा, गिट्टी बोक्न दिएको थियो । लकडाउन सुरु भएपछि नदी, खोलाबाट ढुंगा झिक्न बन्द गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष थारुका अनुसार क्रसर सञ्चालकहरूले सल्लाह गरेर कसैले पनि टेन्डर नहालेका हुन् । ‘नदीजन्य पदार्थ चोरेरै क्रसर चलेको छ भने किन टेन्डर हाल्नु प¥यो ? जरिवाना तिर्न तयार हुन्छन् । तर, टेन्डर हाल्न आउँदैनन्,’ उनले भने । चोरी बढेपछि गाउँपालिकाको करोडौंको राजस्व गुमेको छ । डुडुवाको सीमामा पर्ने राप्ती नदी र डुडुवा खोलामा पनि उत्तिकै दोहन भइरहेको छ ।
स्थानीयका अनुसार नदी र खोलाबाट दिनदहाडै एस्काभेटर प्रयोग गरी गिट्टी झिक्ने गरिएको छ । टिपर रातदिन कुद्ने गरेका छन् । कतिपय क्रसर उद्योग आयोजनाका नाममा सञ्चालित छन् । हुलाकी राजमार्ग, सहरी विकास आयोजनाका लागि पनि क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । विकासका आयोजनाले एउटा क्रसर सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सञ्चालनमा आएका अधिकांश क्रसर उद्योगहरू बिनाआयोजनाका छन् ।
नेपालगन्जबाट सिधनीय पुल हुँदै राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको फत्तेपुर गाउँतिर मोडियो भने राप्ती नदी र आसपासका खोलाको चरम दोहन गरी क्रसर उद्योग चलिरहेको देख्न सकिन्छ । त्यसअघि डुडुवा गाउँपालिकाको सीमाको बस्तीमा अर्को क्रसर उद्योग सञ्चालित छ । त्यस्ता क्रसर उद्योग चलिरहेका स्थानमा बालुवा, ढुंगा र गिट्टीको पहाड लागेको छ । तीन चरणको विद्युत् लाइनबाट २४ सै घण्टा क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, अनौठो के भने पालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का खोल्दा एक जनाको पनि टेन्डर पर्न सकेको छैन् ।
बालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योगले दुंगा, गिट्टी र सडक कालोपत्रे गर्दा प्रयोग हुने बेस उत्पादन गरिरहेका छन् । तर, क्रसर उद्योगका सञ्चालकहरूले भने गत वर्षकै नदीजन्य पदार्थ स्टक रहेकाले त्यसैले काम चलाइरहेको दाबी गर्छन् । डुडुवा गाउँपालिकास्थित जय नेपाल क्रसर उद्योग र फत्तेपुरस्थित राप्ती गणेश बालुवा उद्योगका सञ्चालक हसिम खाँले गत वर्ष रहेको स्टक र डुडुवा खोलाबाट बालुवा ल्याएर प्रशोधन गरिरहेको दाबी गरे । उक्त क्रसर बस्ती र मदरसादेखि नजिकै छ । ‘लकडाउनअघि गाउँपालिकाले खोलेको बेला राजस्व तिरेर ढुंगा बोकेर ल्याएका हौं । गत वर्षको पनि थियो,’ उनले भने, ‘उद्योग चलाउन चोरेर साध्य हुन्न।’
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्री ढुंगा, गिट्टी चोरी हुन नदिन आफैं रातदिन राप्ती नदी र आसपासका खोला पुग्छिन् । प्रहरी प्रशासनसँग गुहार माग्छिन् । ‘चोर र बेइमानहरूसँग नसकिँदो रहेछ । नदीजन्य पदार्थको कारोबार गर्नेहरू निकै पहुँचवाला हुने रैछन् । माथिसम्म पावर हुन्छ उनीहरूको,’ उनले भनिन्, ‘सबै मिलेपछि पालिका एक्लैले केही गर्न सक्दैन ।’ नदीजन्य पदार्थ चोरी नियन्त्रण गर्न खोज्दा ज्यान मार्ने धम्कीसम्म खेप्नु परेको उनले बताइन् ।
उनका अनुसार चोरी नियन्त्रण गर्न प्रहरी र प्रशासनले समेत सहयोग गरेको छैन । क्रसर उद्योगीहरूले नदीजन्य पदार्थ नचोरेको दाबी गरिरहँदा उपाध्यक्ष खत्रीले सोमबार बिहानै झिझरी खोलामा एस्काभेटर प्रयोग गरेर धमाधम नदीजन्य पदार्थ झिकिरहेको आफैंले देखेको सुनाइन् ।
शिवशक्तीपुरमा बोर्डर आउट पोस्टको भवन निर्माण कार्यको शिलन्यास
सशस्त्र प्रहरीद्वारा बर्दियामा नयाँ सीमा स्तंभ फेला
कांग्रेस नेता रेग्मीले जन्मदिनमा २० हजार सहयोग गरे
नहरमा खसी बेपतालाई सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर टोलीले मृत फेला पार्यो
२९ लाख ४८ हजार ७ सय सहित जुवा खेलिरहेका १० जना पक्राउ
Team Lumbini Patra Dainik
सञ्चालकको नाम: यमनाथ घिमिरे
प्रबन्ध निर्देशक : भगवती लामिछाने
सम्पादकको नाम: वसुन्धरा बुढाथोकी ।
कार्यकारी सम्पादक : रोशन ज्ञवाली
संवाददाता: महेन्द्र उपाध्याय, सन्तोष यादव, सुमित घिमिरे
ठेगाना: गुलरिया -६ , सृजना टोल, बर्दिया
सम्पर्क नं.: ९८५८०२१८८८,९८१४५०७८८८
सूचना तथा प्रशारण विभाग दर्ता न.१८०१/०७६-०७७
गुलरिया -६ , सृजना टोल, बर्दिया
Copyright © Lumbini Patra Dainik. All Right Reserved.